आज राति १२ बजेबाट लागु हुने गरि ओली सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय — Sanchar Kendra
आज राति १२ बजेबाट लागु हुने गरि ओली सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
काठमाडौँ । ओली सरकारले आज राति १२ बजेबाट लागु हुने गरि फेरी अर्को ठुलो निर्णय गरेको छ । सरकारले मंगलबार आज मध्यरातबाट लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज राति १२ बजेबाट लकडाउन हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
‘आजभरै रातिबाट हामी लकडाउनमा छौं भनेर भन्नुपरेन,’ खतिवडाले भने, ‘कुनै दिन हाम्रोमा ७ सयसम्म संक्रमित थिए अहिले २ सय भन्दा तल छ। अब यो साउन महिनाभरिको अवस्था हेर्छौं। त्यसपछि भदौमा थप निर्णय लिन्छौं।’
सरकारले लामो दूरीको यातायात भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भदौ १ देखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै निजी सवारी साधानमा लगाउँदै आएको जोर विजोर प्रणाली हटेको छ । मन्त्रिपषिद्को बैठकले जोड विजोर हटाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै साउन १५ गतेबाट होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा होटल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । हाल होटलहरु बन्द नै छन् भने रेष्टुरेन्टहरुमा प्याकिङ र टेक अवे सेवा मात्र दिने अनुमति छ ।
यस्तै भदौ १ गते देखि विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने भएका छन्। अब स्थगित भएका परीक्षाहरु पनि विद्यालयहरुले सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। भर्ना प्रक्रिया तथा परीक्षा सञ्चालनका क्रममा सुरक्षाका मापदण्ड भने अपनाउनुपर्नेछ।
तर अध्ययन अध्यापन गर्नेगरी शैक्षिक संस्था, कलेज, ट्युसन क्लास भने सञ्चालन गर्न नपाइने उनले बताए। शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्नेबारे पछि निर्णय हुने उनले बताए। यस्तै सरकारले सरकारी कार्यालयमा हाल भइरहेको दुई सिफ्टको व्यवस्था अन्त्य गरेको छ । अब विहान १० बजेदेखि साँज ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
हाल विहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म र १ देखि ६ बजेसम्म सरकारी कार्यालय सञ्चालन भएका छन् । सार्वजनिक यातायात खुलेपछि सरकारी कार्यालय पनि नियमित १० देखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने उनले बताए ।
सञ्चारगृहलाई राहत दिन संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सञ्चारगृहलाई राहत र सहुलियत दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार पत्रकार महासंघ र मिडिया सञ्चालकहरुसँग छलफल गर्दै समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देश गरेको हो ।
‘विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ ले आमसञ्चार क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसको प्रभावका बीचमा प्रकाशन प्रसारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा पुर्याएको योगदानको आधारमा सञ्चारगृहलाई सहुलियत, राहत र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ बैठकपछि समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
समितिले सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई रोजगारीबाट हटाइएको पाइए कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेशागत दायित्व निर्वाह गरीररहेका श्रमजीवि पत्रकार र सञ्चारमाध्यममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी बिदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भंग गर्ने जस्ता श्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ विपरीतका कार्यहरु हुन नदिन र भएको पाइएमा कानुन बमोजम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ’ बैठकपछि जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
विकास तथा प्रविधि समितिले विपदमा तीनवटै तहका बीच समन्वयमा काम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हालैका दिनमा भइरहेको वर्षाका कारण मुलुकका अधिकांश ठाउँहरुमा बाढी पहिरो र डुबानमा परी भौत्तिक संरचनाहरु क्षेति हुनुका साथै मानवीय जीवन कष्टकर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले राहत तथा उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको प्रवन्ध मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। समितिले जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई हरसम्भव सहयोग गर्न सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज एवं आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ ।
सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेका बेला यस्तो छ नेपालमा कोरोनाको अवस्था
नेपालमा मंगलबार थप १५० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या १७ हजार ९९४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मंगलबारबार नियमित लाइभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
२७ वटा प्रयोगशालामा ३९६३ जनाको पसीआर परीक्षण गरिएकोमा १५० जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार ४७७ रहेको छ । हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।